NATO oo ciidammo iyo maraakiib hor leh u soo diraya badda Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Brusels, June 30- Afhayeen u hadley Isbahaysiga NATO ayaa waxaa uu shaaca ka qaadey in ciidammo dheeraad ah ay keenayaan xeebaha dalka Soomaaliya iyaga oo baddalaya ciidammadii horey uga joogey halkaasi.
Sida uu sheegey Afhayeenka u hadley NATO maalintii shaley Isniinta waxaa uu sheegey in go?aankani uu yimid kaddib markii bishii la soo dhaafey ay kulan ku yeesheen Wasiirrada gaashaandhigga ee waddamada NATO magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Waxaana ay dhammaanba ay sheegeen waddamada NATO ay ka qeyb qaadanayaan hawl gallada roondeynta ah ee ay laga fulinayo xeebaha geeska Afrika, halkaas oo ah meesha ugu mashquulka badan badaha adduunka.
Chris Davis oo ah Afhayeenka NATO ayaa sheegey in wax weyn laga qabtey gacanka Cadmeed ammaankiisa, waxaana uu sheegey in ay sii wadayaan NATO dadaalka la doonayo in lagu suuliyo waxa uu ku tilmaamey Shayaaddiinta Qarniga 21-aad.
Hawl galka cusub ayaa waxaa fulinaya Shan Markab oo laga kala leeyahay waddamada turkiga, Britain, Italy, Mareykanka iyo Giriigga, waxaana hoggaamin doona Taliya British ah oo lagu magacaabo Steve Chick isaga oo saran markab uu ka lulanayo Calanka waddankiisa Britain oo lagu magacaabo HMS Cornwall.
NATO waxaa ay sheegtey in hawl galladan ay soconayaan Lix bilood oo kale haddii ay habboonaato xaaladda amni ee gacanka Cadmeed waxaa ay sheegeen in ay dib isaga noqonayaan hase yeeshee ay sii wadayaan hawl galka haddii loo sii baahdo.
Tan iyo markii ay bilaabeen NATO hawl gallada ay ka fulinayaan Badda Gacanka Cadmeed waxaan marnaba hakan Afduubka ay burcad badeedda Soomaalida ugu geysanayeen xeebaha dalka Soomaaliya inkasta oo ay jireen hawl gallo ay fuliyeen NATO oo ay ku soo qab qabteen burcad badeed Soomaali ah, iyaga oo markii danbana u gacan geliyey waddamada deriska iyo Dawlad goboleedka Puntland halka qaarna ay iska sii daayeen.